Soomaaliya Oo Olole Ugu Jirta In Laga Khafiifiyo Cunaqabtaynta Hubka Ee Saaran, Qaraarka Arbacada Berri La Horgaynayo Golaha Ammaanka Iyo Aamusnaanta Somaliland – somalilandtoday.com
Soomaaliya Oo Olole Ugu Jirta In Laga Khafiifiyo Cunaqabtaynta Hubka Ee Saaran, Qaraarka Arbacada Berri La Horgaynayo Golaha Ammaanka Iyo Aamusnaanta Somaliland
(SLT-Hargeysa)-Golaha ammaanka Qaramada Midoobay ayaa la filayaa inay Arbacada beri isugu yimaadaan kulan gaar ah oo la filayo inay cunaqabtaynata dhinaca hubka ah kaga khafiifiyaan Soomaaliya, sidoo kale ay cunaqabataynta saaran dalka Ereteriya ka qaadaan.
Qaraar ay soo diyaariyeen dalalka Soomaaliya la saaxiibka ah ee Qatar iyo kuwo kale oo Afrikaan ah, ayaa waxay kaga dalbanayaan golaha ammaanka in Soomaaliya loo ogolaado inay la soo degto hubka noocyadiisa kala duwan si ay u dhisato ciidan milatari oo awood leh.
Qaraarkan oo uu Geeska Afrika arkay, ayaa waxa ku jira noocyo kala duwan oo ah hubka noocyadiisa oo ay dawladda Soomaaliya dunida ka soo iibsan doonto, haddii ay golaha ammaanku ansixiyaan qaraarkan arbacad beri la horgaynayo.
Qaraarkan ayaa haddii la ansixiyo wuxuu dawladda Madaxweyne Farmaajo siinayaa awood ah inay dawladoodu hesho hub iyo qalab ciidan oo kala duwan, waxaana la filayaa inay ku caawiyaan dawladaha la saaxiibka ah oo ay hadda dabar ku tahay cunaqabtaynta hubka ee saaran.
Waxase jira dalal kale oo ka soo horjeeda in la khafiifiyo cunaqabatayntan hubka ee Soomaaliya, iyagoo aaminsan inaanay weli dalka Soomaaliya ka jirin dawlad masuul ah oo lagu aamini karo hubka noocyadiisa kala duwan, waxaanay diblomaasiyiin badani aaminsanyihiin in hubkaasi si fudud gacanta ugu geli karo kooxaha ka dagaalama Soomaaliya.
Geesta kale, dawladda Somaliland ayaan ilaa hadda ka hadal qaraarkan la horgaynayo golaha ammaanka Qaramada Midoobay oo haddii la ansixiyo saamayn guud ku yeelanaya ammaanka guud ee qaranka Somaliland.
Xukuumadihii hore ee dalka soo maray ayaa dhawr goor oo la isku dayay in Soomaaliya laga khafiifiyo cuno qabatayntan hubka ah ee saaran, waxa ay dunida u direen dhambaalo kala duwan oo ay kaga dalbanayaan inaan lagu degdegin in cunaqabtaynta hubka laga qaado dawlada Soomaaliya, maadaama oo uu hubkaasi waxyeelo u gaysan karo ammaanka guud ee Somaliland.
Xukuumaddan maanta oo ay la gudboonayd inay qaado olole diblomaasiyadeed oo ay kaga hortagayso qaraarkan maadaama oo uu hub ay soo iibsato ama lagu caawiyo dawladda Soomaaliya waxyeelo u gaysan karo ammaanka Somaliland, ayaa u muuqata inaanay laba socon, waxaanay dad badan oo diblomaasiyadda iyo xidhiidhka caalamka aqoon durugsan u lihi aaminsanyihiin inuu gaabis ka muuqdo siyaasdda arirmaha dibadda ee Somaliland, xilli ay gobalka iyo caalamka ka socdaan isbedelo maalin maalin u soo kordhiyaa.
Madaxweyne Biixi, ayaa isku shaandhayn uu toddobaadkan sameeyay wuxuu wasaarada khaarajiga ka bedelay wasiirkii Dr. Sacad Cali Shire, oo noqday hadda wasiirka maaliyadda, waxaanu wasiirka arrimaha dibada u magacaabay Yaasiin Xaaji Faratoon oo ahaa wasiirka waxbarashada.